ADOBE ကစာရင်းစစ်အတွက်အသံကအပြောင်းအလဲနဲ့ - မည်သို့ဖြစ်စေ - 2019
တစ်ခုချင်းစီကိုကွန်ပျူတာဖြင့်ကာကွယ်ထားရန်လိုအပ်ပါသည်။ ဒါဟာပါတီကျော်လွှားဖို့ဒါမှမဟုတ်ရောဂါကူးစက်မှုကိုကာကွယ်တားဆီးဖို့အသုံးပြုသူကူညီပေးနေ, antivirus ကိုပေးပါသည်။ တချို့ကတောင်မှတစ်ဦးအသုံးဝင်သော tool များ၏လက်နက်တိုက်များနှင့်ဖော်ရွေ interface ကိုလွင်ပြင်ဘာသာစကားမှာဖြစ်ပါတယ်ရှိသည်။ ကျနော်တို့က ဟူ. ခေါ်ဝေါ်သော anti-virus ပရိုဂရမ်သို့မဟုတ် Tencent "အပြာရောင် Shield 'အကြောင်းပြောဆိုလျှင်မူကား, သင်ဒီထုတ်ကုန်ထံမှအသုံးဝင်သောဘာမျှမရကြပါဘူးရှိသည်သောအပြည့်အဝယုံကြည်မှုနှင့်အတူပြောနိုင်ပါတယ်။
ပစ္စုပ္ပန်နှင့်, စွပ်စွဲအလွန်ထိရောက်သောဖြစ်ကြောင်း Key ကို features တွေဖြစ်ပါသည်: antivirus ကို, Optimizer, သန့်စင်အပျက်အစီးများနှင့်အနည်းငယ်မျှကိရိယာများ။ သင်ပထမဦးဆုံးမျက်မှောက်မှာကြည့်ရှုပါလျှင်အကြောင်း, အကောင်းတစ်ဦးအရာဖြစ်ဟန်ရှိသည်။ ဒီဆော့ဖ်ဝဲကိုသာပြဿနာတွေနဲ့ခေါင်းကိုက်တတ်၏ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဒါပေမယ့်အခြေအနေအတော်လေးဆန့်ကျင်ဘက်ဖြစ်ပါတယ်။
တရုတ်ဆန့်ကျင်-Virus အပြာဒိုင်းလွှား, ပရိယာယ်နှင့်ပြင်ဆင် installation files များသို့မဟုတ်အန္တရာယ် archive ကိုဖြစ်ကအခြားအစီအစဉ်များအဖြစ််၏နိုင်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့်သင်ရုံက install နှင့်သင့်ကွန်ပျူတာ Doom ဖြစ်ပါတယ်။ သင်တို့သည်နောက်တဖန်သင်တို့လက်နှင့်ဖိုင်များကိုသိမ်းဆည်းထားသည်နှင့်အရာဖယ်ရှားနေကြသည်၏စွန်ပလွံမှာဘယ်အရာကိုဆုံးဖြတ်ပါလိမ့်မယ်။ ကို Tencent ဗိုင်းရပ်စ်ရှိသည်နှင့်စနစ်အပြည့်အဝသယံဇာတအရင်းအမြစ်ကိုသုံးပါစေခြင်းငှါ Third-party software ကိုသွင်းထားမှချစ်တော်မူ၏။ အပြာရောင်ဒိုင်းလွှားကိုခက်ခဲသင်တန်း၏, သင့်ရဲ့ခွင့်ပြုချက်မရဘဲသူတို့ကိုဖျက်သောကြောင့်သေးသင်၏ကွန်ပျူတာပေါ်တွင်သင်ကသူတို့ကိုမလိုအပ်လျှင်ပင်, လုံးဝထပ်တူများကိုလိမ့်မည်မဟုတ်ပေ။ သင့် browser များတွင်တရုတ် Pop-up windows မှ Redirect - ဤလည်းသူ့အလုပ်ဖြစ်ပါတယ်။
ဒီ malware ကိုနားလည်ရန်တရုတ်တစ်ခုလုံးကို interface ကိုအဘယ်ကြောင့်ဆိုသော်အလွန်ခက်ခဲသည်။ မရတိုင်းပျမ်းမျှအားအသုံးပြုသူဤဘာသာစကားကိုနားလည်သည်။ ကအပိုင်းအတွက်သူတို့ကိုယ်သူတို့မှတ်ပုံတင်ရန်မနိုင်သောကြောင့်, အစီအစဉ်၏ဖယ်ရှားရေး, အလွန်ဒုက္ခဖြစ်ပါသည် "အစီအစဉ်များနှင့်အင်္ဂါရပ်များ"။ ဒါပေမယ့်ထွက်ရှိပါတယ်, ဒါကြောင့်ကို Tencent နှင့်ဆက်စပ်အပေါငျးတို့သအရာဝတ္ထုကိုရှာရပါလိမ့်မယ်သော်လည်း။ ကင်း Task Manager ကိုနဲ့ browser ကနေ, ဒီဆော့ဝဲအပူချိန်-ဖိုင်တွေအတွက်ဖြစ်စေခြင်းငှါဖြစ်သောကြောင့်ထိုသူတို့က, ဘယ်နေရာမှာမဆိုဖြစ်နိုင်ပါတယ်။
Method ကို 1: အပိုဆောင်း utilities အသုံးပြုခြင်း
ကို Tencent ရုံဖယ်ရှားပြီးမဟုတ်ပါဘူး, ဒါကြောင့်သူတို့ကမကြာခဏအများအပြားအရန်အစီအစဉ်များ၏အကူအညီနှုနျးဖို့ရှိသည်။
အဆိုပါထားသောစာပိုဒ်တိုများရိုက်ထည့်ပါ "Task Manager ကို" ရှာဖွေရေးလယ်ပြင်၌ "Start" သို့မဟုတ်ပဲ click နှိပ် « CTRL + SHIFT + ESC ».
အပြာအကွယ်အကာအပေါငျးတို့သ running ဖြစ်စဉ်များကိုရှာပါ။ သူတို့ကအများအားဖြင့်ဇာတ်ကောင်များ၏အမည်များနှင့်စကားများကြ "ကို Tencent" နှင့် "QQ".
သူတို့ကိုဖြုတ်, အဲဒီနောက် tab ကိုသွားပါ "ဟာ Autorun" နှင့်လည်း antivirus ကိုပိတ်ထားပါ။
scan system ကို utility ကို Malwarebytes Anti-Malware အခမဲ့။
တွေ့ရသောအစိတ်အပိုင်းများဖယ်ရှားပါ။ ကွန်ပျူတာကို restart လုပ်ပါမထားပါနဲ့။
အခုတော့ကိုနှိပ်, AdwCleaner ကိုသုံးပါ "စကင်"ထိုအပြီးစီးပြီးနောက် "သန့်ရှင်းရေး"။ ယင်း utility ကိုစနစ်ပြန်လည်စတင်ရန်ရန်သင့်အားပြပါလျှင် - လျစ်လျူရှု, ပြတင်းပေါက်ပေါ်နှိပ်ကြဘူး။
ကိုလည်းကြည့်ပါ: အ utility ကို အသုံးပြု. ကွန်ပျူတာပျော်စေ AdwCleaner
သော့ကိုပေါင်းစပ်နှိပ်ပါ ဦးဝင်း + R ကို နှင့်ရိုက်ထည့်ပါ regedit လို့.
ထိပ်ပိုင်းက menu မှာတော့စာနယ်ဇင်း "Edit ကို" - "ကိုရှာပါ ... "။ အီးမေးလ်ထဲမှာ "ကို Tencent"။ ရှာဖွေရေးဤဖိုင်များကိုတွေ့လျှင်, ညာဘက်မောက်စ်ခလုတ်ကိုနှိပ်ခြင်းအားဖြင့်သူတို့ကို delete နဲ့ select လုပ်ပါ "ကိုဖျက်"။ ထို့နောက်ရိုက်ထည့်ပါ "QQPC" နှင့်တူညီသောအရာလုပ်ပါ။
ကို Safe Mode သို့ reboot: "Start" - "ပြန်လည်စတင်ပါ".
device ကိုထုတ်လုပ်သူရဲ့လိုဂိုပုံပေါ်သည့်အခါ - ထို F8 key ကိုနှိပ်ပါ။ အခုတော့ကို select "ကို Safe Mode ကို" မြှားနဲ့သော့ ဝင်ရောက်.
လူအပေါင်းတို့သည်လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများပြီးနောက်သင်တို့ရှိသမျှ AdwCleaner re-scan နိုင်ပါတယ်။
နည်းလမ်း 2: တစ် built ဖယ်ရှားမှုကို Apply
ပြီးသားဖော်ပြခဲ့တဲ့အတိုင်း "အပြာရောင် Shield 'ခဲထဲမှာက register လုပ်သွား "အစီအစဉ်များနှင့်အင်္ဂါရပ်များ"ဒါပေမဲ့ system ကိုသုံးပြီး "Explorer ကို" သငျသညျ Uninstall အရှာတွေ့နိုင်ပါသည်။ ဤနည်းလမ်းကိုအဟောင်းတွေဗားရှင်းများအတွက်အများဆုံးဖွယ်ရှိသင့်လျော်သည်။
ကို C: / Program Files (x86) (သို့မဟုတ် Program Files) / ကို Tencent / QQpcMgr (သို့မဟုတ် QQpcTray)
Next ကိုလျှောက်လွှာတစ်ဖိုင်တွဲဗားရှင်းဖြစ်သင့်သည်။ ဒါဟာနာမတော်ကိုအလားတူဖြစ်နိုင်သည် 10.9.16349.216.
ယခုတွင်သင်သည်လို့ခေါ်တဲ့ဖိုင်တွေ့ပါရန်လိုအပ်ပါတယ် "Uninst.exe"။ သင့်အနေဖြင့်အထက်ညာဖက်ထောင့်မှာရှာဖွေရေးလယ်ပြင်၌ရှိသောအရာဝတ္ထုရှာဖွေနိုင်ပါသည်။
Uninstall အပြေးခြင်းအားဖြင့်, လက်ဝဲဘက်အဖြူရောင်ခလုတ်ထဲမှာကိုကလစ်နှိပ်ပါ။
လာမယ့်ပြတင်းပေါက်၌ရှိသမျှကိုခြစ်ကွက်များသတ်မှတ်ပြီး, တဖန်လက်ဝဲ button ကို click လုပ်ပါ။
သငျသညျပေါ့ပ်အပ်ဝင်းဒိုးမတိုင်မီမီးမောင်းထိုးပြခံရလျှင်, လက်ဝဲ option ကိုရွေးပါ။
ကျနော်တို့ပြီးစီးဘို့စောင့်ဆိုင်းနေ, တဖန်လက်ဝဲ mouse ကို button ကို click နေကြသည်။
အခုဆိုရင်သင် registry ကို clean up လုပ်ဖို့လိုပါတယ်။ ဤသည်ကို manually သို့မဟုတ် program ကို CCleaner ကို၏အကူအညီဖြင့်လုပ်ဆောင်နိုင်တယ်။ ဒါဟာအစ, ဥပမာ, ဒေါက်တာစနစ် antivirus ကိုခရီးဆောင်စကင်နာစစျဆေးဖို့အကြံပြုသည် Web ကို Cureit ။
တရုတ်ဆန့်ကျင်-Virus ကောက်ရန်အလွန်ရိုးရှင်းတဲ့ဖြစ်ပါသည်, သို့သော်ဖယ်ရှားပစ်ရန်ခက်ခဲသည်။ ဒီတော့သတိထားပါနှင့်ဝဘ်ကနေဒေါင်းလုပ်ဆွဲနေကြတယ်ဆိုတာကိုဂရုတစိုက်စောင့်ကြည့်နှင့်သင့် PC မှာ install လုပ်ပါကလိုအပ်သော prodelyvat ထိုကဲ့သို့သောရှုပ်ထွေးခြယ်လှယ်မဟုတ်ခဲ့ပေ။